Vaovao - Fampidirana momba ny tsatok'afo
Raha ny motera no 'fon'ny' fiara, dia ny tselatra dia ny 'fon'ny' motera, raha tsy misy ny fanampian'ny bara, dia tsy afaka mandeha tsara ny motera. ny plugs dia hitarika fiatraikany samy hafa amin'ny asan'ny motera amin'ny ankapobeny. Ankoatr'izay, ny sandan'ny hafanana, ny fahita matetika ary ny androm-piainan'ny plug dia miankina amin'ny fitaovana samihafa.
Ny firafitry ny plug
Ny plug dia toa zavatra kely sy tsotra, fa ny tena firafiny anatiny kosa dia tena sarotra. Izy io dia voaforon'ny voanjo tariby, electrode afovoany, electrode grounding, akorandriaka vy ary insulator seramika. Ny electrode ground an'ny plug dia mifamatotra amin'ny vy vy ary atsofoka amin'ny bolongam-motera. Ny andraikitry ny insulator amin'ny seramika dia ny mitoka-monina ny electrode afovoan'ny plug, ary avy eo alefa amin'ny electrode afovoany amin'ny alàlan'ny haavo mahery coil amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana. Rehefa mandalo ny ankehitriny, dia hamakivaky ny medium eo anelanelan'ny electrode afovoany sy ny electrode ground ary hiteraka pitik'afo hahatratra ny tanjon'ny fandrehitra ny etona mifangaro ao anaty varingarina.
The hafanana isan-karazany an'ny bara
Ny halehiben'ny hafanana dia azo takarina amin'ny famafana ny hafanana, amin'ny ankapobeny, ny fatran'ny hafanana avo kokoa dia midika hoe fanaparitahana hafanana tsara kokoa sy mari-pana lafo kokoa. Amin'ny ankapobeny, ny maripana fandoroana optimum ao amin'ny efitrano fandoroana dia eo amin'ny 500-850 ℃. Araka ny maripanan'ny varingarin'ny motera dia afaka misafidy plug ianao. Raha 7 ny halehiben'ny bikan'ny fiaran-dalambinao ary soloinao 5 izy ireo dia mety hiteraka fiparitahan'ny hafanana miadana sy ho be loatra ny lohan'ireo bika, na manalefaka na miempo. Ho fanampin'izany, ny tsy fiparitahan'ny hafanana ratsy dia mety hahatonga ny mixer handrehitra alohan'ny fotoana sy ny motera.
Ho fanavahana ny elanelam-pandrefesana, afaka jerentsika ny halavan'ny fotony. Amin'ny ankapobeny, raha toa ka lava be ny fotony, dia plug-tselatra karazana mafana izany ary ankapobeny ny fahafaha-manaparitaka ny hafanana; Mifanohitra amin'izany kosa, ny vovo-tsipika misy ny halavany fohy kokoa dia ny plug-karazany mangatsiaka ary ny tanjaky ny fanaparitahana hafanana dia matanjaka kokoa. Mazava ho azy, ny elanelam-pandrefesan'ny bara dia azo ahitsy amin'ny fanovana ny fitaovan'ny electrode, fa ny fanovana ny halavan'ny fotony dia mahazatra kokoa. Satria ny fohy kokoa ny tsimoka, ny fohy kokoa ny lalan'ny fanaparitahana ny hafanana ary ny mora kokoa amin'ny famindrana ny hafanana, dia tsy dia miteraka hafanana be loatra amin'ny elektrôtra afovoany izany.
Amin'izao fotoana izao dia samy hafa ny isan'ny maridrefin'ny hafanana ho an'ny Bosch sy NGK. Ny isa kely kokoa amin'ny maodely dia maneho ny halavan'ny hafanana avo kokoa ho an'ny plug spark NGK, fa ny isa lehibe kokoa amin'ny maodely kosa dia maneho ny halehiben'ny hafanana avo kokoa ho an'ny plug-in Bosch. Ohatra, ny plug-in NGK's BP5ES dia manana halavirana hafanana mitovy amin'ny tsipika sparkter an'i Bosch FR8NP. Ho fanampin'izay, ny ankamaroan'ny fiaran'ny mpianakavy dia mampiasa bara mitentina hafanana. Ary koa, rehefa novaina sy nohavaozina ny motera, ny haavon'ny hafanana dia tokony hampitomboina ihany koa arakaraka ny fiakaran'ny herin-tsoavaly. Amin'ny ankapobeny, isaky ny 75-100 ny soavaly tsoavaly, ny haavon'ny hafanana dia tokony hiakatra amin'ny ambaratonga iray. Ankoatr'izay, ho an'ny fiakaran'ny tosidrà lehibe sy ny fivezivezena lehibe, ny plug-in-karazany mangatsiaka dia matetika ampiasaina mba hiantohana ny fitoniana amin'ny plug-in satria ny tsiranoka misy karazana mangatsiaka dia mampihena ny hafanana haingana kokoa noho ny karazana mafana.
Ny elanelan'ny bara
Ny elanelan'ny bara dia manondro ny elanelana misy eo amin'ny electrode afovoany sy ny electrode ilany. Marihina fa ny elanelana kely dia hiteraka firehitry ny afo mialoha ny fotoana sy ny tranga maty. Mifanohitra amin'izany no hitranga, ny banga lehibe dia hitarika loto maro amin'ny karbaona, hihena ny herinaratra ary hitombo ny fanjifana solika. Noho izany, rehefa mametaka plug-in tsy voalohany ianao dia tsy tokony hifantoka fotsiny amin'ny karazana electrode spark sy ny halavan'ny hafanana, fa koa jereo ny elanelan'ny bara. Matetika ny litera farany (plug-in Bosch) na tarehimarika (plug-in NKG) an'ny maodely spark dia manondro ny halehiben'ny banga. Ohatra, ny plug-in NKG BCPR5EY-N-11 ary ny plug-n'ny Bosch HR8II33X dia manana habaka 1.1mm.
Spark plugs dia ampahany lehibe amin'ny motera. Raha tsy niova hatry ny ela izy ireo dia hitranga ny olan'ny fandrehitra izay mety hiafara amin'ny fitokonana.